कथा Archives - Page2of3- A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार २२:५३ April 14, 2018 Buddha Sharan
चैत ३० ,काठमाडौँ / भक्तपुरको सबैभन्दा महत्वो पूर्ण बिस्केट जात्राको वास्तविक नाम बिस्का जात्रा हो । सौर्यमासको आधारमा मनाइने देशको एकमात्र बिस्का जात्रा भक्तपुरको मां ख्यामा चैत्र मसान्तमा ३२ हाते लिङ्गो ठड्याएर बैसाख १ गतेका दिन विधिवत ढल्ने परम्परा लिक्ष्वीकाल देखि चलिआएको छ । बिष धारी नाग मारिएको हर्ष उल्ल्हस सहित योपर्व […]
१६ माघ २०७४, मंगलवार २०:०९ October 28, 2018 Nonstop Khabar
प्रिय भन्साली सर ! सर्वप्रथम तपाईंको महान् फिल्म पद्मावत रिलिज भएकोमा बधाई । यद्यपि तपाईको फिल्म पद्मावतीबाट पद्मावत भएको छ, दीपिका पादुकोणको आकर्षक कम्मर गायब भएको छ र समग्रमा फिल्मबाट ७० सिन गायब भएका छन् । तर, तपाईं आफ्नो फिल्म थिएटरमा पुगेको छ, हामी भाग्यमानी हौँ, यो सब हुँदा पनि सबैको टाउको गर्धनमै छ, र […]
मनोयुद्धको मचानः साने ! मैले तिमीलाई सुनाउनै पर्ने कथा यो
३० पुस २०७४, आईतवार ११:१५ January 16, 2018 Nonstop Khabar
सुन्जुकी ! मनोयुद्दको मचानबाट तिमीलाई सुनाउनै पर्ने कथा हो यो । आज लम्वेतान गफ नमारी म साँने र केशरका कथा सुनाउँछु । तिमीसँग सहमत नभएको विषय के हो भने तिमी इतिहासलाई मुर्दाको कथन र चिहानघारीको यात्रा भन्छेउ, तर त्यसो हैन् । तिमीले भोगिरहेको जीवन धेरै भूईमान्छेका कथा, सपना, व्यथाका चिहानमाथि उभिएका धरहरा हुन् । लेखक […]
अमेरिका प्रवेश गरेपछि हाम्री एउटी मात्र छोरीको हिन्दू परम्पराअनुसार नेपाली केटोसँग विवाह गरिदियौँ । केही वर्षपछि नातिनीहरू भए । ‘साँउभन्दा ब्याज प्यारो’ भनेझैँ ती कलिला मुनाहरू आँखाका नानी भए, हाम्रा लागि । तोतेबोली र बालापनको बेलामा मेरी हजूरआमा रमाएझैँ हामी पनि यी अबोध प्यारा नानीहरूको बाललीलामा रमायौँ । समय मिलाएर हामी बूढाबूढी तिनीहरूको बेबीसिटर बन्थ्यौँ । कहिले पार्कमा खेलाउन लान्थ्यौँ, […]
पत्रकार भएका कारण बाँचेको त्यो दिन
९ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०४:३६ August 26, 2017 Nonstop Khabar
म पत्रकार नभएको भए सायद डाक्टर, इञ्जीनियर, कुनै व्यवसायी वा नेतामध्ये केही हुन्थें भन्न खोजेको होइन । यहाँ भन्न खोजिएको गाँठी कुरो म पत्रकार वाहेक अन्य पेसाकर्मी भएको भए सायद अहिलेसम्म तपाईसामु यो संसारमा रहन्नथे होला । यसको मतलव पत्रकारिता गरेको पारिश्रमिकले बाँचेको छु भन्न खोजेको होइन । एकदशक अघि मेरो जीवनमा घटेको घटना मेरो […]
मरकस बाबालाई किन मुद्दा दिनु प¥यो त !
२६ श्रावण २०७४, बिहीबार ०९:३७ October 5, 2017 Nonstop Khabar
म सगरमाथाको चुचुरोबाट मरकस बाबालाई फेरि नालिस ठोक्दैछु । मेरो यो दोस्रो फराद पत्र हो । यसलाई उच्च अदालत सामु अपिल भनेर बुझियोस् । पहिलो, नालिस नेपालमा जनयुद्ध चल्दै गर्दाको थियो । दोस्रो, अहिले घनघोर मनोयुद्ध चल्दै गर्दाको हो । नालिस दिनको कारण मरकस–पिसाच लागेपछि दुनियाँमा भाँडभैलो मच्चियो भनेर हो । अझ झन बिग्रदै जाँदैछ […]
कथा : तृपट काकाको शोख
१९ श्रावण २०७४, बिहीबार १३:४१ August 3, 2017 Nonstop Khabar
काका स्वभावैले त थिए नैं, बाबजुद, शारीरिक हिसाबले पनि अजिवकै देखिन्थे । लाम्चो अनुहार, कुटिल चेहरा, तिखा आँखा, अनि खुइलिएका तालुका धनी ६० बर्षिय तिर्पट काका झन्डै ६ फिट अग्ला कदका थिए । यसमा के अजिवता छ र भनेर मेरो दोहोलो काढ्न नसक्ने हैन तपैहरुले । त्यसैले त म भन्दैछु, खानदानी भनौं या पुर्खौली, अथवा […]
कथा : म बोक्सी होइन
२ श्रावण २०७४, सोमबार १४:२१ July 17, 2017 Nonstop Khabar
मलाई तेल घसेर बिहानको पारिलो घाम परेको पिँढीमा सुताउनुभएको थियो रे मेरी आमाले । गाउँमा कति मान्छे आउँथे, कति जान्थे हरेक दिन पत्तै नहुने रे । प्रायः मलाई हेर्न आउने गर्थे भन्नुहुन्थ्यो आमा । त्यसमा पनि हाम्रो घर चोकमै पर्ने, घरछेउमै निम्नमाध्यमिक विद्यालय र केही चिया पसलहरू पनि थिए । स्कुलको छेउमै बरपिपलको चौतारी थियो । जहाँ हरेकक्षण गाउँका […]
३० असार २०७४, शुक्रबार ०७:१८ July 15, 2017 Nonstop Khabar